Apple inoburitsa iOS 14.6 yevashandisi vese | IPhone nhau
Apple inoburitsa iOS 14.6 uye iPadOS 14.6 yevashandisi vese
Inovandudza zuva muApple zvakasikwa. Midziyo yako yese inogamuchira nyowani nyowani yesoftware inoenderana nhasi. ZvemaPhones, nyowani iOS 14.6uye iPadOS 14.6 yePads, iyo mushure memazhinji mabheta apedzisira aburitswa kune vese vashandisi.
Iyo nyowani nyowani ine inoshamisa kuvandudzwa, senge rutsigiro rweApple Kadhi Mhuri, kunyoreswa kumaPodcast, uye kugadzirisa mukudzora kwemaAirTag matsva.
Apple ichangoburitsa iOS 14.6 uye iPadOS 14.6 maminetsi mashoma apfuura kune vese vashandisi. Iyi yekuvandudza inosanganisira rutsigiro rwe Apple Kadhi Mhuri, Apple kunyorera podcast, kuvandudza mukutonga kweiyo nyowani AirTag uye zvakakosha kuchengetedzwa.
Semazuva ese, unogona kugadzirisa yako iPhone nekuenda ku "Zvirongwa" kunyorera, kusarudza "General" uyezve kusarudza "Software Kwidziridzo".
Apple Kadhi Yemhuri uye Podcast Zvinyorwa
Kwaingova nemwedzi chete kubva iko kwekupedzisira kugadzirisa, iOS 14.5, asi zvakadaro haina kukosha. Imwe yemabhaisikopo ayo makuru hapana mubvunzo kusanganiswa kweApple Kadhi Mhuri, ichibvumira shandisa Apple Card nedzimwe nhengo dzemhuri.
iOS 14.6 inotsigirawo Podcasts app yeApple itsva podcasting chikuva. Izvi inobvumira podcasts kupa kunyorera Bhadhara kuzviratidziro zvako nezviri mukati mebhonasi sezvikamu zvisina kushambadza uye episodhi-chete zvikamu.
Zvimwe zvinhu zvitsva muIOS 14.6 zvinosanganisira zvinyorwa zveiyo AirTag, kuvandudzika kwekuwanika, uye akasiyana siyana emukati bug bug fixes.
Rutsva muchikamu cheAirTag kugona kuwedzera a email kero panzvimbo yenhamba yefoni paunogonesa iyo yakarasika nzira yeAirTag.
Nenzira iyi iyo AirTag inoratidza nhamba yefoni zvishoma zvakavanzika ikabatwa neNFC-inoenderana mudziyo, uye inongoratidza chete email kero.
Kunze kwezvinhu izvi zvitsva, zvinogadzirisa zvakare zvinotevera matambudziko anowanikwa mushanduro dzakapfuura:
Kuvhura neApple Watch kunogona kusashanda mushure mekushandisa Lock iPhone pane Apple Watch.
Zviyeuchidzo zvinogona kuoneka semitsetse isina chinhu.
Kufona ichivharira ekuwedzera kunogona kutadza kuoneka muZvirongwa
Zvigadzirwa zveBluetooth zvinogona kudzima kana kutumira odhiyo kune chakasiyana chishandiso panguva yekufona.
Iyo iPhone inogona kuona kuderedzwa kuita panguva yekutanga.
Dzimwe dzese dzekugadzirisa ndedzekuchengetedza zvemukati, izvo zvinoenda zvachose zvisingaonekwe nemushandisi wekupedzisira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Apple inoburitsa iOS 14.6 uye iPadOS 14.6 yevashandisi vese
Apple inoburitsa watchOS 7.5 yevashandisi vese
Uchishandisa nguva kubva kuImba app pane iyo HomePod ichave inogoneka muIOS 14.7